टीकाराम भट्टराई भन्छन्– ‘चाेलेन्द्ररहीत अदालत नेपाल बारकाे बटमलाइन हाे' || समाचार
न्यायालय शुद्धीकरणको पहिलो सर्त प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा भन्दै आएका भट्टराई त्यसपछि अन्य सुधारका कार्यक्रम अघि बढ्ने बताउँछन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान लिएको, दलहरु महाभियोगका लागि तयार नभएको र इजलास सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा सेतोपट्टी र अन्य प्रदर्शन भइरहेका बेला बारको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे टीकाराम भट्टराईलाई पाँच प्रश्न :
केही केही असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए । अहिले ती स्वर मत्थर भएका छन् । आम कानुन व्यवसायी प्रभावकारी ढंगले बारको आन्दोलनमा सहभागी भइरहनुभएको छ । आन्दोलन उपत्यका नाघेर आइतबारदेखि देशभरका सबै अदालतमा १० देखि १२ बजेसम्म कालोपट्टिका साथ धर्ना कार्यक्रम सुरू भएको छ । यसले देशव्यापी आकार ग्रहण गरेको छ ।
न्यायमा अवरोध कसरी गर्नुभयो भन्दा पहिलो त आफ्नो स्वार्थ बाझिएका मुद्दा जसरी पनि आफैं हेर्ने जिद्दी र लहड सिर्जना गर्नुभएको छ । दोस्रो उहाँले कार्यकारीसँग बसेर हिस्सेदारी खोज्नुभएको छ र त्यो हिस्सेदारी लिएर गरिएका नियुक्तिका विरुद्धमा परेका मुद्दा ११ महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइहरु गरिराख्नुभएको छैन । अर्को उहाँले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दा, आफन्त, नातागोता र विचौलियाबाट प्रभावित भएका मुद्दा चाँडो चाँडो पेशीमा राख्ने र छिन्ने, आम जनताका धेरै पूराना मुद्दाहरु पेशीमा नराख्ने गरिरहनुभएको छ ।
तपाईंले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्नुभयो । केही समूह जस्तै सेतो पट्टी बाध्ने, बानेश्वर, माइतीघरमा न्यायालय सूचारु गर्नुपर्ने, प्रधानन्याधीशले राजीनामा दिँदैमा शुद्धीकरण नहुने, न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आन्दोलन त विभाजन भयो नि ?
माइतीघर मण्डला वा अन्त कतै बस्ने विभिन्न खालका साथी छन् । एउटा भ्रमवश नबुझेर नेपाल बारविरुद्धमा गएका साथी छन् । एक खालका साथी विचौलियाको पैसा लिएर, प्रभावित भएर विचौलिया र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने गलत उद्देश्यका उपस्थित भएका छन् ।
माइतीघरमा बारको आन्दोलनको विपक्ष र असन्तुष्टिमा रहनुभएका साथीलाई हाम्रो आह्वान छ, बारको आन्दोलनलाई साथ र सहयोग दिनुपर्छ । केही कुरा बुझ्नुभएको छैन, असन्तुष्टि छन् भने तपाईंले बार परिसरभित्रै, आफ्नो घरभित्रै बसेर राख्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्न चाहन्छौं । त्यहाँभित्र असल आशयका साथ भ्रमवश केही साथी लाग्नुभएको छ । जो मानिसहरु भाडाको पैसा लिएर त्यो आन्दोलनमा लागेका छन् त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनताले पहिचान गर्नेछन् । तिनलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन ।
महाभियोगभन्दा अघि बढिसकेको परिस्थिति, जनदबाबको भरमा न्यायका पक्षधरको आवाजका भरमा उहाँ बहिर्गमन हुन बाध्य हुनुहुन्छ । उहाँले नैतिक, कानुनी, वैधता सम्पूर्ण रुपमा गुमाइसक्नुभएको छ । यो निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तै हो । जसरी हाम्रो आन्दोलन भइरहेको बेलामा केही भाडाका मान्छे ल्याएर उफारियो त्यसले पनि निभ्ने बेलाको वत्तीको संकेत गरिरहेको छ ।
तर, तपाईंहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोर बाटोबाट छिर्नुभएको छ । इजलास तोक्नुभएको छ । सुनुवाइ तथा आदेश गर्नुभएको छ । उहाँलाई रोक्न अब तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
उहाँ जसरी आउनुहुन्छ आन्दोलनका कार्यक्रम तदअनुरुप नै निर्धारण हुन्छन् । अब प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अदालतमा मुख्य गेटबाट प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था कति दिन रहला ? आफ्ना न्यायाधीशसँग इजलास सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँ कति दिन रहन सक्नुहोला ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज प्रश्न उठिसकेकोमा यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै उहाँ कति दिन रहन सक्नुहोला ? त्यसकारण उहाँले चोर बाटोबाट अब अदालत प्रवेश गर्न पनि धेरै दिन सक्नुहुने छैन । त्यसमा हामी विश्वस्त छौं ।
निकास भनेको सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको अनुपस्थिति । उहाँले मुद्दा नतोक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता र उहाँको राजीनामा यो नै निकास हो । नेपाल बार एशोसिएसन अब यो भन्दा पछाडि फर्केर कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । चोलेन्द्ररहित सर्वोच्च अदालत नै बारको अहिलेको माग हो । –न्युज कारखाना